Ulefone Tiger, finday avo lenta tsy latsaky ny 100 euro | Androidsis
Ulefone Tiger, finday avo lenta tsy mampino latsaky ny 100 euro
Jose Alfocea | | About us, Ulefone
Ulefone dia mety tsy marika fanta-daza ho anao. Mazava ho azy, tsy dia tsara toy ny goavambe hafa ao amin'ny sehatry ny smartphone Android toa ny Huawei, HTC, Xiaomi na Samsung izy ity, na izany aza, nahavita nanamboatra akany lehibe iray teny an-tsena ity mpanamboatra sinoa ity, mampiseho izany haitao avo lenta izany. tsy manana hoe maninona lafo.
Ny Ulefone Tiger no filanao lehibe farany farany. Fakan-tsarimihetsika misy fampiasa premium izay misoroka ny plastika, matanjaka, avo lenta ary miaraka amin'ny bateria goavambe manome azy ny fahaleovan-tena ilain'ny mpampiasa tsirairay amin'ny andavanandrom-piainany. Ary izany rehetra izany dia ambany noho ny 90 euro. Tsy mino Ahy ianao? Lojika, fa vakio hatrany ary fantaro izay rehetra azon'ny terminal Ulefone vaovao atolotra ho an'io vidiny mihomehy io.
1 Eny, tsara sy maharitra, ity ilay Tigra Ulefone
1.5 Ulefone Tigra vidiny sy misy
Eny, tsara sy maharitra, ity ilay Tigra Ulefone
Toy izao no mamaritra ny vaovao ny orinasa Tigra Ulefone, finday avo lenta izay miavaka amin'ny fisehoany tsara sy ny vidiny mirary, ary izany no ho singa tadiavin'ny mpampiasa mihoatra ny iray. Handany kijana hanavao ny finday finday Android-nao ve ianao? Aleo ianao mahita hoe inona ilay "tigra" nataon'i Ulefone afaka manolotra anao voalohany, hankasitraka izany ny paosinao.
Ny vaovao Tigra Ulefone manana tsara Efijery 5,5 inch y 1280 x 720 HD vahaolana amin'ny Corning Gorilla Glass 3 ary ho avy miaraka Android 6.0 Marshmallow napetraka ho toy ny fenitra amin'ny dikantenin-janany ary miaraka amin'ny fanampiny hafahafa.
Ny rafitra iray manontolo dia hafindra amin'ny a MediaTek 6737 1,3 GHz quad core processeur miaraka amin'i Fahatsiarovana RAM 2 GB.
Raha ny amin'ny tahiry fitahirizany dia ho tonga izy 16 GB fenitra (eto ireo tovolahy avy any Ulefone dia nianjera kely kely) na dia azo itarina amin'ny karatra microSD hatramin'ny 128 GB aza.
El Tigra Ulefone Smartphone izy io izay manana endrika maoderina, manintona ary mitandrina tsara. Vita amin'ny vy izy io, ary ahena ny bezel amin'ny lafiny ambany indrindra, refin'ny 155.8 x 77.8 x 9.35 milimetatra ary 155 grama fotsiny ny lanjany. Noho izany, na dia tsy terminal farany manify eo amin'ny tsena aza izy io, dia ho maivana sy ahazoana aina tokoa.
Ao amin'ny fizarana fifandraisana, ny Tigra Ulefone manohana ny tamba-jotra GSM 850/900/1800/1900 (band5, band8, band3, band2), tamba-jotra WCDMA 900/2100 (band8, band1) ary tamba-jotra FDD-LTE 800/900/1800/2100/2600 (band20, band8, band3 , band1, band7), WiFi 2.4GHz 802.11b / g / n, ary koa Bluetooth 4.0 hampifandray ireo kojakoja tianao indrindra toy ny headphones, speaker, smartwatches ...
Iray amin'ireo faritra isongadinan'ny smartphone Ulefone vaovao ny resaka sary sy horonan-tsary. ny Tigra Ulefone Manana fakantsary roa izy io. Ny fakan-tsary any aoriana dia novokarin'i Sony, izy io dia a 219 megapixel Sony IMX13, miaraka amin'ny fahaiza-manao horonantsary roa sy 1080p raha toa ka maotina kokoa ny fakantsary anoloana, toy ny fanao amin'ny finday rehetra, ary manolotra 5 megapixel.
Fa ny teboka lehibe manohana Tigra Ulefone fiara tsara io. Ny terminal dia mampiditra a bateria lithium 4.200 mAh novokarin'i Sony ihany koa izay mampanantena eo anelanelan'ny 480 sy 550 ora amin'ny alàlan'ny mode stand-by ary, tsy isalasalana fa hamela ireo mpampiasa hiaritra mandritra ny tontolo andro tsy misy olana, ary handeha hatory mihitsy aza "amin'ny angovo sisa", satria ny mpanamboatra azy manokana dia manondro fa hitazona ny terminal hatramin'ny roa andro amin'ny fampiasana mahazatra.
Ho fanampin'izay rehetra efa noresahintsika, ny Tigra Ulefone Izy io koa dia manana radio FM, mpamaky ny rantsan-tànana, GPS, accelerometer, sensor light ambient, ary SIM dual, hahafahanao mitondra nomeraon-telefaona roa tsy miova terminal.
Ny vidiny sy ny fisian'ny Tigra Ulefone
El Tigra Ulefone Izy io dia ao amin'ny dingana mialoha ny varotra amin'ny vidiny $ 99,99 hatramin'ny 29 Oktobra. Aorian'io daty io dia $ 119,99 ny vidiny. Izy io dia atolotra amin'ny famaranana telo: Sky Blac, Space Gray ary Champagne Golden, ary efa azonao atao ny mividy azy, ankoatry ny hafa, amin'ny Aliexpress, 90 euro mahery fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ulefone Tiger, finday avo lenta tsy mampino latsaky ny 100 euro
Toa tsara izany fa aleoko ny BLUBOO EDGE
Ny Google Pixel dia miavaka amin'ny finday avo lenta Android finday tsara indrindra amin'izao fotoana izao
Ny Samsung Galaxy C9 miaraka amin'ny fakantsary 16MP sy RAM 6GB havoaka amin'ny 21 Oktobra